Sida Looga Hortago Matoorada Raadinta Indexing WordPress | Martech Zone
Sida Looga Xidho Matoorada Raadinta Indexing WordPress
Sabtida, Janaayo 23, 2021 Khamiis, Maarso 24, 2022 Douglas Karr
Waxay umuuqataa macmiil kasta oo labaad oo aan leenahay degel WordPress ama blog ah. Waxaan ku sameeynaa tan horumarin qaas ah iyo naqshadeynta WordPress - wax kasta oo ka yimaada dhismayaasha loogu talagalay shirkadaha illaa horumarinta barnaamijka socodka fiidiyowga iyadoo la adeegsanayo adeegyada daruuraha Amazon. WordPress had iyo jeer maahan xalka saxda ah, laakiin waa mid jilicsan waana ku fiicanahay.
Marar badan, waxaan masraxyo u dhignaa si ay macaamiisheennu u sii eegaan oo u naqdiyaan shaqada inta aynaan toos u dhigin. Mararka qaarkood xitaa waan soo dhoofsannaa waxyaabaha hadda jira ee macaamilka si aan uga shaqeyn karno goob dhab ah oo leh waxyaabo toos ah. Ma dooneyno Google inuu ku jahwareeriyo goobta uu yahay dhabta ah goobta, sidaa darteed waxaan niyad jebin matoorada raadinta ka tusaya bogga adoo isticmaalaya farsamo caadi ah.
Sida Loo Xanibo Makiinadaha Raadinta ee WordPress
Maskaxda ku hay in block waxaa laga yaabaa inuu erey aad u xoog badan yahay Waxaa jira qaabab looga horjoogsado gurguurta mashiinka raadinta in ay dhab ahaan gasho bartaada… laakiin waxa aan halkaan ku sameyneyno runti waxaan ka codsaneynaa oo keliya in aysan ku tilmaamin goobta natiijooyinka raadinta.
In tan lagu sameeyo gudaha WordPress waa wax fudud. Gudaha Dejinta> Akhrinta liiska, waxaad si fudud u hubin kartaa sanduuq:
Sida Looga Hortago Matoorada Raadinta Isticmaalka Robots.txt
Intaa waxaa sii dheer, haddii aad marin u hesho galka shabakadda asalka ah ee bartaadu ku taal, sidoo kale waad awoodi kartaa wax ka beddel aaladahaaga robot.txt fayl in:
Wakiilka isticmaalaha: * Diidmo: /
Wax ka beddelka robots.txt ayaa runtii u shaqeyn doona degel kasta. Mar labaad, haddii aad isticmaaleyso WordPress, ka Xisaabta Xisaabta SEO Plugin waxay awood u siineysaa awooda aad ku cusbooneysiin karto faylkaaga Robots.txt si toos ah iyagoo adeegsanaya isdhexgalkooda… taas oo xoogaa ka fudud ka isku dayga inaad FTP ku soo gasho bartaada oo aad adigu laftaada wax ka beddesho.
Haddii aad soo saareyso codsi aan dhammeystirnayn, barnaamijyo aad ku abaabusho goob kale ama subdomain, ama aad soo saareyso goob nuqul ah sababo jira awgood - way fiicantahay in laga joojiyo makiinadaha raadinta inay tixgeliyaan bartaada oo aad u isticmaasho isticmaaleyaasha mashiinka raadinta meel khaldan!
Tags: xannibo bingblock duckduckgoxannibo matoorada raadintadarajo xisaabta seo pluginrobots.txtWordPressdejimaha akhriska wordpressdejinta wordpress
Tababarka Suuqyada Dijital ah